Zimbabwe: Inaugural Zim Achivers Aussie Nominees Announced - allAfrica.com
Zimbabwe: Inaugural Zim Achivers Aussie Nominees Announced
ZAA Australia Secretary Jaison Midzi said, "We have been inundated with some outstanding nominations for the inaugural event, and it highlighted the exceptional work that Zimbabweans are doing... ."
ZAA Founder Conrad Mwanza said, "The community spirit that has been built and the calibre of individuals and organisations that we have recognised over the years in different countries really shows how talented, determined and studious Zimbabweans are in building something we can all be proud of."
Dr Lance Mambondiani, Steward Bank CEO, one of the sponsors of ZAA Australia added, "Any nation that does not honour its heroes will not endure. Our association with the Zimbabwe Achievers is our token of support to the rewards of core values of hard work, resilience, dedication and triumph over adversity; values without which no nation can endure."
Voting will commence on Tuesday 12th September and will run until the 10th of October 2017. Thereafter, votes will be verified by ZAAs Panel of professionals who will arduously assess shortlisted candidates and match up their achievements with the set criteria before emerging with this year's list of winners.
Hilton Adelaide is set in the heart of the city's entertainment, shopping and dining precincts, the Central Market, Chinatown and Gouger Street.
The ZAA annual gala dinner has become the red carpet event and the most popular date on the Zimbabwean community's calendar. It remains the pinnacle of celebration for the accomplishments of Zimbabweans who are settled in the diaspora.
5. Africa's Got Talent
1. Tinonakirwa - Bodyguard
3. Francois - Growing pains
4. Tkay Maidza - Do it right
5. Kudzai - Ehheh